Septambra 2021 - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Isam-bolana: Septambra 2021
Ireo mpampianatra any Arzantina dia mandray anjara amin'ny fanabeazana tontolo iainana feno amin'ny alàlan'ny fitsabahana amin'ny famolavolana fandaharam-pianarana sy ny tetikasa ary ny programa mikendry ny fampidirana ny refy momba ny tontolo iainana ho an'ny fampandrosoana maharitra ho ampahany amin'ny tolo-kevitry ny fampianarana. [tohizo ny famakiana…]
Septambra 18, 2021 0
Ny fikarohana nataon'i Fatih Yilmaz dia mizaha ny fomba fahitan'ny mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany ny fiheverana ny fandriampahalemana sy ny herisetra amin'ny fiainany andavanandro. [tohizo ny famakiana…]
Septambra 15, 2021 0
Ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny Faritra Lakes dia nangataka tamin'ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Ivotoeram-pampandrosoana ny fandaharam-pianarana nasionaly any Oganda mba hampiditra ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana amin'ny fandaharam-pianarana nasionaly. [tohizo ny famakiana…]
Septambra 6, 2021 0
“Raha te hahita fiarahamonina ara-tsosialy ara-tsosialy bebe kokoa ho an'ny rehetra isika, dia tsy maintsy esorintsika aloha ny fanavakavaham-bolon-koditra. Tokony hanomboka ao an-dakilasy isika ary tokony hampianatra hanova an'izao tontolo izao ny mpampianatra. ” - Tauheedah Baker (2020) [tohizo ny famakiana…]